Chechipiri makosi | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: Zvidzidzo zvechipiri
Caramelized pork ribs ne garlic uye ginger
Kubika zvinonaka zvembambo yenguruve zvinotora moyo murefu. Iyo yakareba nyama yakabikwa, tastier ichave iri. Uye zvakare, iyo yenguruve pane pfupa ine muto uye inonaka. Mbabvu yenguruve dzakanakisa mu ...
Chiukraine cuisine: nyama benderiki - recipe
Benderiki inonyanya kugadzirirwa kumatunhu ekumadokero eUkraine. Muchokwadi, aya ndiwo crepes ane nyama yekuzadza. Asi kwete echinyakare - mabhanzi, asi akapetwa mumatatu. Zvekuti kuzadzwa kwema benderik kune muto uye ...
Krisimasi turkey yakagadzirwa nebhekoni, chiropa uye masiji - chiyeredzi chikuru!
Tafura yako yeGore Idzva inotaridzika senge chaiyo ngano kana iwe ukaisa yakadaro turkey pairi. Huru, muto, zvinovaka uye chaizvo, zvinonaka kwazvo! Kune 7-8 servings, iwe unoda: 1 hombe turkey ...
Chicken ne cheese mipira
Unoda huku inonaka ine chizi here? Ndezvipi zvinozadzisa kuravira kwedhishi, riite rakanyanya kukosha? Ipapo nzira yedu yehuku nemabhizi echizi anoenderana newe! Fudza imba nehuku yakakangwa neyakajairika dhishi ...
Portuguese Cuisine: Recipe for Rice ne White Beans uye Lingual Sausage
Chiputi chechiPutukezi hachigone kufungidzirwa pasina mahesheni mabhureki Kune chiuru uye chiuru mabikirwo emabhinzi muto, masaladi, akaomarara emadhishi. Mhando dzakasiyana dzebhinzi dzinosanganiswa nehove nenyama. Iyo inoshandiswa kugadzirira sangweji inopararira, mbatatisi yakakwenenzverwa uye kunyange kuzadzwa kwemadhizeti anotapira. Tarisa uone yakakwana nzira, Chiputukezi chikafu - chena bhinzi uye soseji. Iyo dhishi inogona kutaridzirwa seyakamira yega-kana yakaoma yedivi dhishi. Kwake, ivo vanosarudza zvinonhuwira semi-kusvuta nyama yenguruve sausage ine hanyanisi, paprika uye mhiripiri. MuPortugal, mhando iyi yesoseji inonzi linguiça. Pane kudaro, unogona kushandisa chero imwe nyama kana kuputa nyama. Zvinongedzo zvePutukezi Bhinzi Mapoka: Jari yenyuchi chena dzakabikwa; 200 g soseji; 1 karoti yega yega, gariki uye hanyanisi; boka reparsley nyowani; 200 g yemupunga. Kubika Bhinzi Kana ukashandisa bhinzi yakaoma kuresipi, kugadzirira kwacho kunotora zuva rose. Iwe uchafanirwa kuinyudza kweanenge gumi nemaviri maawa, wobva wabika kwenguva yakareba. Asi iwe unogona kushandisa chikafu chemumagaba - chirongo chebhinzi dzakabikwa chinochengetedza yakawanda nguva. Chinhu chikuru ndechekuti bhinzi dziri muhari dziri mubhinzi, uye hadzinyanyi kubikirwa muporridge. Ndiro rinobikwa kubva pakutanga kusvika pakupedzisira mune imwe mbiya. Fry anyanisi uye makarotsi nezvimedu zvesoseji (muMediterranean cuisine, mafuta eorivhi anoshandiswa kutsvaira). Wedzera mupunga. Unogona kudira mvura inodzika kana muto uri kufashaira. Kurudzira, kuravira uye kuwedzera bhinzi. Kugadzirira kuona kuti mupunga wagadzirira riini.Fukidza neparsley yakachekwa usati washandira. Zvimwe chete…
Nzira yekuti fry mbatatisi mubiki anononoka?
maitiro ekutsvaira mbatatisi mune anononoka mubiki? Kuti fry mbatatisi mune multicooker, iwe unofanirwa kushandisa iyo Kubheka kana Frying chirongwa. Nguva yekubika matapiri inoenderana nesimba remuenzaniso uye saizi yembatata dzakatemwa. ...
Maitiro ekutora sei dumbu rechikamu yenguruve pasi pemafurandi kana iyo flank yacho inonzi nemafuta ane zvimedu zve nyama.
Maitiro ekuisa munyu mudumbu wenguruve yenguruve dumbu kana padivi iyo inonzi neiri mafuta ane matanda enyama ini ndinokurudzira kubika dumbu renguruve. Dururirai 4 tbsp munyu mukati megorosi. zvipunu zve1kg uye tsvuku ...
Nzira yekubika miriwo aldente?
Ungabika sei aldente miriwo? Bika kwete kusvikira wanyatsogadzirwa, wozoiisa pasi pemvura inotonhora, ini handizive nezvemvura yechando. Ini ndinobika zvinotevera - ndinocheka zucchini kana zucchini hombe ...
Nzira yekubika jisi kana mapira mapeji nemukaka? Pane here mapepa mapepa akaedza kuita?
Ungabika sei mupunga kana mapira porridge mumukaka? Pane here mapipi akajeka akaedzwa mukuita? Kana ini ndichiyera nemagirazi uye ndikasashanda zvakanaka nezvipunu, ndinotarisa nekuravira nezvose ...
Ndinogona here kunya mbatatisi nemafuta akafuridzirwa kana mushonga?
zvinokwanisika here kuti furaya matapiri ane howa kana mushwa howa? unogona kukanga mbatatisi imwe, woidya nemakowa ane munyu uye akasanganiswa (haufanirwe kuatsvaira).
Nzira yekukuridzira bhariri kuti iome sei?
Nzira yekubika bhari kuitira kuti igumbuke? Dururira zviyo muhombodo uye woisa pasi penzizi nyoro yemvura, fambisa kusvikira zvese madhiri asukwa (iyi ndiyo hupfu hwakaumbwa panguva yekufambisa zviyo ...
Inguva ipi yekubika nyama dzekuku?
Zvinotora nguva yakareba sei kubika huku matumbu? Zvakadaro, nzira yakanaka kwazvo) Cheka hanyanisi muzvindori, fry, wedzera karoti dzakakangwa, furaya zvishoma. Wobva watumira pepper yeBulgaria yakagurwa kuita zvidimbu kumiriwo, uye zvakare ...
Iwe unogadzira sei girafu yezvokuputika?
unoita sei kuti iwe wakabatirwa mhiripiri? Makarotsi angu chikamu chekuzadza (hanyanisi, sauteed karoti, mupunga mushoma wakabikwa, nyama yakakangwa yakakangwa - kungochinja ruvara uye kuve ...
Nzira yekubika nyama nyanga nyanga
mabikirwo enyama dzakachekwa nyanga Bika manyanga, fry nyama yakagayiwa nehanyanisi nedomasi, unogona kusanganisa nyama inoguma nenyanga, kana unogona kungoisa nyama padhuze ne ...
Chii chinonzi mussels ??
Mussels inobatsira sei? Kufanana nezvose zvekudya zvegungwa, ivo vakapfuma mumapuroteni uye ma microelements. Mussels ese ari bivalve molluscs. Mussel nyama inopfuura zvese maererano nezviri mukati meiyo glycogen inobatsira muviri wemunhu ...
How to cook pilaf? kuti rizi rive rakaoma.
sei kubika pilaf nenzira kwayo? kuitira kuti mupunga ugumbuke. mvura shoma inodiwa, uye panguva yekubika, usavhure muvharo uye usakanganisa pilaf. Ndine mupunga kwehafu yeawa muzuva ...
Nzira yekubika jisi? saka anofambisa ruvara rweruvara? akanzwa nehuturi kana chii chinoda kuwedzerwa?
Ungabika sei mupunga? kuitira kuti awane yero yeruvara? wanzwa ne turmeric kana chii chandinofanira kuwedzera? Safironi chete ndiyo inogona kupa zvese ruvara uye hwema. Turmeric ichapa ruvara, asi kwete iyo tambo ...
Chii chinokanganisa nyama?
Chii chinonzi marbled beef ?! Heano akanaka machena http://www.kamentorg.ru/ Ini ndinokukurudzira kuti utarise uye sarudza chimwe chinhu chako ipapo ... nyama yemombe ine mitsipa yakatetepa yemafuta. Iyi nyama ine zvidimbu zvemafuta zvinogadzira ...
Nzira yekubika sei moyo, chiropa uye mapapu? nyama yenguruve
sei kubika mwoyo, chiropa uye mapapu zvinonaka? nyama yenguruve Wakamboedza kudya MAI MABOKO? Vanoti zvinonaka)) Kutendeseka, ini handizive mabikirwo ezvinhu zvakadaro.)) Zvirinani kuve chokwadi, nyoro ...
Mibvunzo ye49 mu database yakagadzirwa mu 0,645 masekondi.